प्रचण्डको गेयर चेन्जमा को पर्लान ? भट्टरार्इ मन्त्री हुने पक्का – www.agnijwala.com
प्रचण्डको गेयर चेन्जमा को पर्लान ? भट्टरार्इ मन्त्री हुने पक्का
काठमाडाैं । सधै केन्द्रीय राजनीतिमा चर्चा रहेका र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले बेलाबेला नयाँ कुरा गर्ने गरेका छन् ।यसै क्रममा उनले यो सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आएका थिए । किन यसो भने छन् त भन्दा अहिले आएर थाहा भएको छ।
अहिले प्रधानमन्त्री अोली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘दुबै अध्यक्षले मन्त्रीहरूको कामको मुल्याङकन गर्नु भइरहेको छ’ नेकपाका एक नेताले बताए । ‘दसैं र तिहारको बीचमा केहि मन्त्री हटाएर केहि नयाँ मन्त्री बनाउने तयारी छ ।’
उक्त बिषयको पुष्टि बुधबार राजधानीको बागबजारमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले नेकपाका नेता योगेश भट्टरार्इलार्इ मन्त्री बनाउने बताएका थिए । प्रचण्डले भने, ‘अब ओलीजी र म मिलेर योगेशजीलाई मन्त्री बनाउने बाचा पुरा गर्छौं ।
प्रचण्डको सल्लाहमा ’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले दसैं र तिहारको बीचमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । केहि मन्त्रीको कामदेखि असन्तुष्टि रहेका अोलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।